Imodeli ye-OnePlus elandelayo iya kongeza i-Snapdragon 835 | Iindaba zeGajethi
Imodeli ye-OnePlus elandelayo iya kongeza i-Snapdragon 835
Ekupheleni konyaka ophelileyo inkampani yaseMzantsi Korea Isamsung yabeka iodolo enkulu yeeprosesa zeQualcomm Snapdragon 835, Kwaye kungekudala nje emva kokuba iinkampani ezininzi zibhengeze izixhobo zazo kunye neprosesa yangaphambili ngenxa yokunqongophala kwemodeli yamuva yeeprosesa zeQualcomm. Ityala lokumiselwa kwe-LG ye-G6 okanye ukunikezelwa kweNkulumbuso ye-Sony Xperia XZ kwi-MWC e-Barcelona, ​​kwacaca ukuba inkampani yase-South Korea ayizange ixoke xa isithi yongamele phantse zonke iprosesa zeQualcomm, yiyo loo nto I-LG G6 ineprosesa yenguqulo yangaphambili kwaye i-Sony ayizukukhutshwa kude kube phakathi enyakeni.
Kwimeko yemodeli entsha ye-OnePlus, ikhutshiwe ukuba ingayinyusa le processor kwaye, ukongeza kwiscreen se-intshi ye-5,5, le nguqulo intsha yesixhobo esimangalisayo iya kongeza eyamva kwiQualcomm, Oko kukuthi, kwiinyanga ezimbalwa. Ngokucacileyo namhlanje abanako ukubanakho ukusebenzisa le processor njengazo zonke iimveliso ezikhoyo kwintengiso, kodwa umdlalo unokuhamba kakuhle xa befumana Ibe sele ilungile kwinyanga kaJuni nangoJulayi Yilapho iimodeli ezintsha ze-OnePlus zihlala ziboniswa.
Ke ngoku singatsho ngaphandle koloyiko lokuba sizokungalunganga ukuba imodeli entsha ye-OnePlus iya kuba yenye yezona zinto zibalaseleyo ngokwamandla kunye nokubalulwa, okuthi ukuba sidibanisa uyilo oluhle oluhlala lune-OnePlus kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo kuthathelwa ingqalelo imigaqo, thina ziphambi kwesixhobo esinomdla ngokwenene. Kuya kufuneka silinde ithutyana kwaye sibone ukuba yinyani kuyo yonke le processor entsha ye-Snapdragon 835 kule OnePlus, kodwa phantse ngokuqinisekileyo ukuba iya kugqiba ukuyifaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Imodeli ye-OnePlus elandelayo iya kongeza i-Snapdragon 835
Aba ngabasebenzi baseSpain abazula simahla